थाहा खबर: 'तत्काल विद्युतको केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोड्दै छौँ'
कमलबजार नगरपालिका अछामको पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित छ। जिल्लाको पञ्चदेवल विनायक नगरपलिका, ढकारी गाउँपालिका, मंगलसैन नगरपालिका र तुर्माखाद गाउँपालिकासँग सिमाना जोडिएको कमलबजार नगरपालिकामा पर्यटकीय, कृषि, जडिबुटी आदिका दृष्टिले धेरै सम्भावना छन्।
कमलबजार नगरपालिका साविकका नौवटा गाविस (मुली, बयाला, चाल्सा, कुइका, वीरपथ, सेरा, ढाँकु, मकष्टाबण्डाली, घोडासैन) मिलाएर वि.सं. २०७३ मा स्थापना भएको हो। सोही नगरपालिकाका उपप्रमुख भूमिशरण ढकाल (बजगाईं) सँग थाहाखबरकर्मी रमेश रावतले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
तपाईं पहिलेदेखि समाजिक कार्यमा लाग्नुभएको मान्छे। जनप्रतिनिधि भएर सामाजिक काम गर्नु र पदमा नरहेर गर्नुमा के फरक पाउनुभयो?
हामी पहिले खुला आकाशमुनि थियौँ वा कुनै परिधिमा थिएनौँ भनौँ। एक राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएको नाताले पहिले सबै क्षेत्रमा आवाज उठाउँथ्यौँ तर अहिले सबैको प्रतिनिधि भएर काम गर्दा र आफैँ जिम्मेवार तहमा रहेर काम गर्दा निकै फरक हुँदोरहेछ। कस्तो भने अधिकार माग्ने निकायमा भन्दा प्रदान गर्ने निकायमा हुँदा अलिक अप्ठ्यारो हुँदोरहेछ।
चुनावको बेलामा केके प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो, ती पूरा भए?
चुनावको बेलामा थुप्रै कुरा हामीले जनताको माझमा बोलेका छौँ। बोलेका कामहरू क्रमशः गर्दै पनि छौँ। हामीले जनताको जनजीविकासँग जोडिएका सवालहरूलाई उठाएका थियौँ। ती कामहरू विस्तारै गर्दै छौँ।
यो कुरा बोल्या हो, अहिले यति काम गरिसक्यौँ भन्ने केही छैन?
मैले भन्दै थिएँ, जनताको जीवनपद्धतिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सवालहरू हामीले बोलेका हौँ। तपाईंले के गर्नुभयो भनिरहँदा हामीले यस क्षेत्रका गर्भवती महिलाहरूलाई प्रसूति केन्द्रमा जान यातायातका साधनको समस्या भएको भन्दै एम्बुलेन्स खरिद गरेका छौँ। जिल्ला सदरमुकाम जाने सडकको स्तर उन्नति गर्ने काम गरेका छौँ। विभिन्न विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण गरेका छौँ। मुली–बेलखेत सडक निर्माण गरिरहेका छौँ। त्यसबाट नेपालगंज–सुर्खेत जान नजिक पर्छ।
तपाईं न्यायिक समितिको संयोजक पनि हो। कस्ता खालका उजुरीहरू आउने गरेका छन्?
यो ग्रामीण ठाउँ हो। समाजमा धेरैजसो मुद्दाहरू सामान्य कुरामा हुने गर्छन्। ती मुद्दाहरू मेलमिलापको बाटोबाट नै समाधान भइरहेका छन्। गाउँमा मदिरा सेवन गरेर गाली बेइज्जती गरेको, होहल्ला गरेको, अंशबण्डामा भनाभन भएको जस्ता समस्याहरू बढी आउने गरेका छन्। हामीले आपसी समझदारीमा ती मुद्दाहरूलाई मिलाएका छौँ।
एक राजनीतिक कार्यकर्ता न्यायाधीशजस्तो बन्नुपर्दा कतिको चुनौती देख्नुहुन्छ?
तपाईंले जोडिदिनुभयो। हामी लामो समयसम्म राजनीतिक दलको कार्यकर्ताका हिसाबले गाउँमा हुने सानातिना मुद्दामामिलाको छलफलमा बस्नेबाहेक अरू ज्ञान नभएका मान्छेहरू एकाएक न्यायदाता जस्तो बन्न निकै गाह्रो हो। फेरि कानुनबारे धेरै ज्ञान हामीलाई हुँदैन पनि। त्यसैले अझै धेरै तालिमहरू लिन पाएको भए केही सहज हुन्थ्यो।
आर्थिक समृद्धिका लागि यस नगरपालिकाका प्रमुख आधारहरू केके हुन्?
कमलबजार नगरपालिका आफैँमा एक मजबुत नगरपालिका हो। हामीसँग विभिन्न तरकारी तथा फलफूल फल्ने उर्बर भूमि छ। पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्। कर्णाली नदीसँग हामी जोडिएका छौँ। यी विभिन्न आधारहरू हाम्रा समृद्धिका आधारहरू हुन्।
समृद्धिको आधारअन्तर्गत कृषियोग्य जमिनको कुरा गर्नुभयो। कृषिका लागि के योजना बनाउनुभएको छ?
हामीले सबैभन्दा प्रमुख कुरा माटो परीक्षणमा जोड दिएका छौँ। माटो परीक्षण गरेर माटो र हावा पानी सुहाउँदो आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाउने नीति लिएका छौँ। कृषकहरू के खेती गर्न चाहनुहुन्छ, हामी त्यही खेतीतर्फ प्रेरित हुन आग्रह गर्छौं। हामी कृषकहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार छौँ। प्राविधिक सहयोग र आर्थिक सहयोग हामीले गर्दै आइरहेका छौँ। बयालालाई आँप जोनको रूपमा विकास गरिन्छ।
कमलबजार विमानस्थल गौचरणमा परिणत भयो र कमलबजार बहुमुखी क्याम्पसले विद्यार्थी पाएन। यी प्रमुख समस्या हुन् नि, होइन र?
विमानस्थलको कुरा लामो समयदेखि उठिरहेको छ। विमानस्थल सुरुका लागि हामीले निर्वाचित हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएका हौँ। हामीले नगरपालिकाबाटै पनि पहल गर्दा मन्त्रालयले त्यो काम हाम्रो हो भन्यो। मन्त्रालयका अनुसार यसको काम चाँडै सुरु हुन्छ। क्याम्पसको कुरा जो छ, यस वर्ष क्याम्पसका लागि भौतिक संरचना नगरको सहयोगमा निर्माण भइसकेको छ। यस वर्षबाट नियमित पढाइ हुन्छ। पढाइ नियमित हुँदा विद्यार्थी भर्ना भइहाल्छन्।
यो नगरका नगर प्रमुख ओमप्रकाश विष्टले जति यहाँका लागि कसैले पनि योगदान गरेका छैनन्। उहाँले एयरपोर्टका लागि विभिन्न क्षेत्रमा समन्वय गरिरहनुभएको छ।
नगरको केन्द्रमै खानेपानीको हाहाकार छ। नगरले व्यवस्थापन गर्न किन सकेन?
कमलबजारको केन्द्र अग्लो क्षेत्रमा छ। यो डाँडामा खानेपानीका मुहान छैनन्। हामीले धेरै टाढाको मुहानबाट पानि ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो समस्या समाधान हुन्छ।
तत्काल कुनै ठूलो काम गर्दै हुनुहुन्छ र?
तत्काल नै विद्युतको केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोड्दै छौँ। केही महिनामै कमलबजारमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत बलेको देख्न पाउनुहुनेछ।